[TUT]Vbulletin Forum Hacking with Header-Based SQL injection[TUT] | Shwekoyantaw
[TUT]Vbulletin Forum Hacking with Header-Based SQL injection[TUT]
Published : 7:05 AM Author : shwekoyantaw
Injecting Vbulletin Forum
Category : Forum Group Injection
Method : Header-Based SQL injection
Original Exploit :http://www.exploit-i...-sql-injection- vulnerability by D4rkB1t
Vulnerable Version : 4.0.x to 4.1.2
(Ques? ကိုနတ်ဆိုးရေ... အခုပြောမယ့် အကြောင်းအရာလေးကို နဲနဲလောက်ရှင်းပြပါဦး)
(Ans : ဟုတ်ကဲ့ပါ... ရှင်းပါတယ်.. Vbulletin Forum တွေကို SQL injection ပေါက်တဲ့အကြောင်းလေးပါတယ်... ကန်.သတ်ချက်လေးတွေရှိပါတယ်....အပေါ်မှာရေထားတဲ့အတိုင်း.... version က 4.0.x ကနေ 4.1.2 အတွင်းပဲရမှာ vulnerable ဖြစ်နှုန်းက ... နဲနဲနည်းပါတယ်... 50% ၀န်းကျင်လောက်တော့ရှိပါတယ်... vbulletin ဆိုတော့ Admin login ရှာရတာလွယ်ပါတယ်.... ရလာတဲ့ hash ကို ဖြည်ဖို.ခက်တာပါ)
MRTV-4 ကတွေ.ဆုံမေးမြန်းတဲ့ စတိုင်ဖမ်းထားတယ်....
(Ques? ဟင်..ခင်ဗျားဟာကလည်း... version ကလည်းအောက်သေး.... ဖြစ်နိုင်ခြေကလည်းနည်းသေး... hashed ကလည်းဖြေမရတော့... ဘာသွားလုပ်တော့မှာတုန်း...)
(Ans: နည်းပညာလေဗျ နည်းပညာ...
နည်းပညာလိုက်စားသူတိုင်းက တစ်ခုခု...အသစ်သိရတိုင်း...ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့လေ့လာတက်ကြတယ်... ခင်ဗျားနည်းပညာကိုမသိချင်ဘူးလား..?)
တော်ပါပြီ... လေပန်းနေတာရပ်ပြီး... စပါတော့မယ်... ဒန်တန်.တန်.....
အရင်ဆုံး Live Http headers မရှိသူများ.... အမြန်ဆုံးသွင်းလိုက်ကြပါ....
goto : broswer >> Alt+T >> A >> Search for addons
ပုံမှန်ဆိုရင် ... google မှာ dork ထည့်ရှာပြီး... Forum ၀င်ပြီး... ဖောက်ရမှာပါတယ်... အခုတော့ ကျွန်တော့် demo လေးနဲ.ပဲ ...လုပ်ပါတော့...
Forum rules ကမြန်မာ website များမလုပ်ပါနဲ.ဆိုတော့... အခုဟာက ... ခဏလေးပဲစမ်းကြည့်မှာပါ... (Rule လွတ်တယ်နော် )
password ရလည်းဘာမှလုပ်လို.မရပါဘူး ... (သိတဲ့အတိုင်းပဲ.. Vbulletin hash အကြောင်းကိုလေ)
အဲဒီ့တော့ vul ဖြစ်တဲ့နေရာ .... Community ထဲက ... Groups နေရာမှာပါ....
site ရဲ. ညာဘက်ထောင့်ဆုံး.... အပေါ်နားလေးမှာ ... Advanced Search button လေးကို နှိပ်ပါ
လုပ်ရမယ့်အဆင့်ဆင့်က ... forum မှာ member ၀င်... အုပ်စုထဲကိုသွား...ကိုယ့်ဘာသာ ...အုပ်စုတစ်ခုခုကို create လုပ် ...
ဒါမှမဟုတ်လဲ ... ရှိပြီးသား...တစ်ခုခုကို ခဏမှတ်ထားလိုက်ပေါ့...
ဒီအဆင့်တွေပြီးသွားရင် ... စောစောက Advanced Search ကိုပြန်သွားပါ ...
ကိုယ်မှတ်ထားတဲ့ Group နာမည်ကို search box ထဲထည့်ပါ....
စောစော Install လုပ်ထားတဲ့ ... Live Http headers add-on ကိုဖွင့်ထားပါ ...
ပြီးရင် search now ကိုနှိပ်ပါ...
ပုံမှာ highlight လုပ်ထားတဲ့ ... စာသားလေးကိုတွေ.အောင်ရှာပါ ...
ပြီးရင်... click လုပ်... အောက်က replay button ကိုနှိပ်....
cotent box ထဲက.... စာတွေထဲမှာ နောက်ဆုံးက .. Id= ဆိုတာကိုတွေ.တယ်ဟုတ်... အဲဒီ့ မှာ SQL query တွေပို.မှာ...
အောက်ကဟာလေးကို cp/paste လုပ်ပြီး.... replay button ကိုနှိပ်ပါ...
&cat=1) union select version#
ဒါဆိုအခုလို vesion မြင်ရမယ်....
နောက်ဆုံးအဆင့် ... usr name တွေ password တွေ လိုချင်ရင်အောက်က query ကိုစောစောကအတိုင်းပို.လိုက်ပေါ့....
&cat=1 union+select+group_concat(userid,0x3a,username,0x3a,password,0x3a,usergroupid) from user where usergroupid=6#
ဒီလောက်ဆို... သဘောပေါက်လောက်ပါတယ်... နော်...
အားနည်းချက်.... Human Image Verification ... ရှိနေရင်...မရပါ....
copy from mhu
Thank to D3vilM4yCry